Shiinaha Soosaarayaasha Labeelka Kuleylka Kuleylka iyo alaableyda | Nolosha Deegaanka
Magaca Product: Sumadda Kala-wareejinta kuleylka
Waxyaabaha ugu muhiimsan: Filimka Silicone iyo PET
Dharka la adeegsan karo: Dharka guud iyo dabacsanaanta
Faahfaahinta Cabbirka loo habeeyay
Maydh @ 40 ℃: Heer sare
Imtixaanka Maydhashada: In ka badan 20 jeer (30mins / waqti)
Bixinta: L / C, T / T, Kaarka amaahda, Western Union, PayPal (amar yar)
Maxay Yahiin Calaamadaha Kala Wareejinta Kuleylka?
Sumadaha Kala wareejinta kuleylka (sidoo kale loo yaqaan HEAT SEAL iyo TAG LESS) waa mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan suuqa dharka. Laga soo bilaabo sumadaha kaamka fudud iyada oo loo marayo magaca, dharka dabbaasha, ciyaaraha fudud, dharka qoob-ka-ciyaarka, dharka hoosta, dharka ilmaha ilaa astaanta sumadda, ku wareejinta kulaylku waxay noqotay badeecadda “Hadda waan doonayaa”.
Waa geedi socod kudaabacaya naqshad shay shay iyadoo la adeegsanayo kuleylka iyo cadaadiska. Badanaa naqshadeynta waxaa lagu daabacaa warqad ama side synthetic ah kadibna waxaa lagu dabaqaa shayga la doonayo, inta badan alaabada dharka ee si toos ah ula xiriiri doona maqaarka, sida nigiska, dharka dabbaasha, dharka isboortiga & funaanadaha.
Sumadaha wareejinta kuleylka waa kuwo aad u adkeysi badan waxayna u adkeysan karaan daraasiin wareegyada dhaqida / qallalan iyaga oo aan ka yarayn, dillaacin ama kala bixin Nooc kasta oo nashqadeyn ah ayaa loo sameyn karaa sidii kuleyl wareejin. Looma baahna qalab darajo ganacsi loo adeegsado habka arjiga, kaliya birta guriga oo fudud ayaa ku filnaan doonta noocyada badankood. Wareejinta qaaska ah, amarrada mugga sare leh iyo ka shaqeynta degdegga ah, waxaa lagula talinayaa saxaafadda kuleylka ganacsiga.
Sideed U Codsataa Sumadaha Kala Wareejinta Kuleylka?
Fers Wareejinta Heat Calaamadaha dharka waxaa lagu isticmaali karaa iyadoo la isticmaalayo birta guriga ama saxaafadda kulul ee ganacsiga.
Codsigu wuu kala duwanaan doonaa iyadoo ku xiran hadba dharka iyo nooca sumadda wareejinta.
● Had iyo jeer raac shirkadaha sameeya tilmaamaha.
Hore: Badhanka Lingual Orthodontic / badhanka denim / badhanka shank
Xiga: Warqadda Gaarka ah ee Hang Tag
Sumadda tolmo wanaagsan: Calaamadda ugu weyn, Sumadda cabbirka, Calaamadda daryeelka ...
Badhanka birta birta ah